AMISOM oo sheegtay kalka lagu tooganayo askarta Uganda | KEYDMEDIA ENGLISH
AMISOM oo sheegtay kalka lagu tooganayo askarta Uganda
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayaa ku dhawaaqay in askarta Uganda ee dhawaan lagu riday xukunnada kala duwan dib loogu celin doona Kampala.
MUQDISHO, Soomaaliya - Labo ka mid ah shan askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM ee ka socda dalka Ugandha, oo loo heysto xasuuqii ka dhacay Golweyn 10-kii Ogosto 2021, ayaa 12 November 2021, lagu xukumay dil toogasho ah, halka Saddexda kalana lagu riday min 39 sano oo xukun xabsi ah.
War ka soo baxay AMISOM, ayaa lagu sheegay in askarta la xukumay dib loogu celin doono dalkooda Uganda, iyagoo halkaas ku mari doona ciqaabta ay dul-dhigtay Maxkamadda Ciidamada AMISOM.
“Waxaa lagu soo celin doonaa Uganda si ay ugu dhameystaan ​​xukunkooda”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay AMISOM.
Shalay ayay ahayd markii Wasiirka Cadaaladda DF Cabdiqaadir Maxamed, [Jaamac] uu sheegay in labada Askari ee dilka lagu xukumay ay toogashadooda ka dhacayso Soomaaliya, taas oo ka dhigan in dowladda iyo AMISOM, ku kala aragti duwan yihiin qodobkaan.
Ehellada dadkii beeraleyda ahaa ee lagu laayay Golweyn, ayaa goobjoog ka ahaa Maxakamadda lagu xukumay askarta, lamana oga in ay aqbali doonaan in xukunsanayaasha loo qaado Uganda.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waa howlgal-goboleed nabad ilaalin ah, oo ay maamusho Midowga Afrika, waxaana ansixiyey Qaramada Midoobay, hayeeshee, waxaa si joogto ah loogu eedeeyaa dilal kala duwan iyo gabood-fallo foolxun oo ka dhan ah shacabka.
Golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ayaa dhidibada u taagay AMISOM 19-ka bishii January 2007.